ပြင်သစ်မှဆွစ်ဇာလန်အထိ,7ရိုင်းသဘာဝအစက်အပြောက်, ငြိမ်းချမ်းသောရေကန်များ, နှင့်ထူးဆန်းသောရဲတိုက်များသည်ဥရောပ၌အမှတ်ရစရာအားလပ်ရက်များအနက်သင်၏ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်. ဒါကြောင့်, အလင်းထုပ်ပိုးပြီးသင်နှင့်အတူအမှတ်တရများနှင့်ပုံပြင်များသာသယ်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်, သငျသညျသစ်တစ်ခုစွန့်စားမှုစတင်အဖြစ်, ခရီးမသွားသောလမ်းများကိုသာလျှောက်လှမ်းပါ.
သငျသညျပန်းရောင်နှင့်ချစ်စရာကောင်းဒေသ၏မြို့တော်၌သင်တို့၏အခြေစိုက်စခန်းစေနိုင်ပါတယ်, Toulouse, သို့မဟုတ်ချစ်စရာကောင်း Albi မြို့. နှစ် ဦး စလုံးတစ် ဦး ရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းမှတစ် ဦး အဘို့အံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ် မြို့ချိုး ပြင်သစ်နှင့်ကြာကြာစွန့်စားမှုနှင့် ပြင်သစ်အားလပ်ရက်. သင် Toulouse ကိုအလွယ်တကူနဲ့အဆင်ပြေစွာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထားခရီးသွားဖြင့် အကြောင်းကိုအတွက်ပဲရစ်နှင့်ဘာစီလိုနာကနေ5နာရီ.
Hallstatt ကျေးရွာသည် Hallstatt ရေကန်တွင်တည်ရှိသည့်ပုံပြည့်စုံသောရွာဖြစ်သည်. နွေ ဦး ရာသီမှာ, ကျ, ဒါမှမဟုတ်ဆောင်းရာသီ, ၎င်းသည်မည်သည့်ရာသီမဆိုပကတိပရဒိသုဖြစ်သည်, အဆိုပါ adrenaline ဝါသနာအိုးခရီးသွားများအတွက်အဘို့အပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအများကြီးကမ်းလှမ်း. ဒါမှမဟုတ်ဆန့်ကျင်ပေါ်မှာ, သငျသညျစပျစ်ရည်ကိုတစ်ခွက်နှင့်အတူအိုင်နားမှာအေးအေးဆေးဆေးအိပ်မက်မက်နေတယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ် လှေစီးစီးပေါ်မှာ ကန်ပတ်ပတ်လည်, Hallstatt သည်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်.
Another great way to spend your vacation in Haarlem is to visit the oldest breweries. ပြန်ရောက် 1620, အဲဒီမှာ 100 ဘီယာ, နှင့်ယနေ့သင်ဆဲဟောင်းချက်ပြုတ်နည်းများအချို့မြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်. သာ။ ကောင်း၏, မွို့၌များစွာသောပြတိုက်များထဲမှတစ် ဦး အလည်အပတ်ပြီးနောက်, ပြီးတော့ရှိပါတယ် ပြတိုက်တွေ အခြားမည်သည့်ဒတ်ခ်ျမြို့ထက် Haarlem ၌တည်၏.
ကောက်ချက်ချရန်, အဆိုပါရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကိုချွတ်ဒီသည် လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက် ဥရောပရဲ့ချစ်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံများနှင့်တစ် ဦး အလည်အပတ်လုံးဝတန်ဖိုးရှိ၌တည်၏!
အပြင်ဘက်ရှိရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောနောက်ထပ်အရံတစ်ခုမှာ Kladska ဖြစ်သည် သဘာဝအရံ. There’sabeautiful trail to the lake, ထိုသို့အထူးသဖြင့်ကျဆုံးခြင်းအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါပေမဲ့, သငျသညျသေးငယ်တဲ့မြို့များနှင့် chateaux ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်, ထို့နောက်သင်သည် Neo-Gothic ကိုချစ်လိမ့်မည် Hluboka Chateau.
မြို့ခွဲသည်3ဒေသများ: မြို့ဟောင်း, တောင်, နှင့်ဆိပ်ကမ်း, အရာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူများ၏နေအိမ်များဖြစ်ကြသည်. ထိုကွောငျ့, ဒါဟာအချက်အပြုတ်မိုheaven်းကောင်းကင်သည်, သင်၏နှလုံးဆန္ဒရှိသမျှကိုထမ်းဆောင်ခြင်း. ပြတိုက်, ကြီးမားသောစျေးကွက်, ဘုရားရှိခိုးကြောငျး, ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်ဖန်တီးမှုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများ, ရုံတစ်နာရီကွာမြို့တော်ကနေဖြစ်ကြသည်, ရထားနဲ့.
များအတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Lucerne အကြီးအအခြေစိုက်စခန်း နေ့ခရီးများ အဲလ်ပ်တောင်တန်းသို့, နှင့်ခရီးသွားများကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်. ဒါကြောင့်သင်ပျော်မွေ့ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရလိမ့်မယ်. နဂါးလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်ပြီးကြိုးပန်းခြံမှာမင်းရဲ့ခွန်အားကိုစမ်းသပ်ပါ, Lucerne န်းကျင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ပါတယ်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပရှိ Beaten Path Destinations off 7” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/off-beaten-path-…tinations-europe/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, မင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရထားလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ် https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / fr သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ကပြောင်းလဲနိုင်သည်.
antwerp citybreakeurope offbeatenpath offthebeatenpath ရထားခရီးသွား ချစ်သူ ဟုတ်ပါတယ် travelitaly travelswitzerland